တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း၌ ရှားပါးတိရစ္ဆာန်များတွေ့ရှိရ - Xinhua News Agency
လန်ကျိုး၊ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကန်းစု ပြည်နယ်ရှိ Anxi အမျိုးသား သဘာဝဘေးမဲ့တောတွင် နှင်းကျားသစ်များနှင့် မြေခွေးများကို တွေ့ရှိကြောင်း ဒေသခံ သဘာဝဘေးမဲ့တောမှ ဝန်ထမ်းများက ပြောကြားခဲ့သည်။အနည်းဆုံး နှင်းကျားသစ် ၃ ကောင်နှင့် မြေခွေး ၈ ကောင် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း အရံအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းကဆိုသည်။ နှင်းများထူထပ်နေသော တောင်ပေါ်သို့ အတွဲလိုက်အစာရှာထွက်လာပုံကို ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဒါကဘေးမဲ့တောထဲမှာ ဒီမျိုးစိတ် နှစ်ခုကို အများဆုံးတွေ့ဖူးတဲ့ အရေအတွက်ပဲ။’’ ဟု ဘေးမဲ့တောရှိ သုတေသီ Pei Pengzu ကပြောသည်။
Anxi အမျိုးသား သဘာဝဘေးမဲ့တောသည် အလွန်ခြောက်သွေ့သော သဲကန္တာရများ၏ ဂေဟစနစ်များနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ကာကွယ်ရန် အလေးထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ တစ်ခုတည်းသော သဘာဝဘေးမဲ့တောဖြစ်ကြောင်း Pei က ဆိုသည်။
ဘေးမဲ့တောတွင် ကုန်းနေကျောရိုးရှိ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၁၀ ရှိပြီး ၎င်းတို့အနက် နှင်းကျားသစ် ရှစ်ကောင် နှင့် မြေခွေးများလည်း ပါဝင်ကြောင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပထမတန်းစား ကာကွယ်ထားသော တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ယင်းနေရာတွင် ရှားပါးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရာ နိုင်ငံတော်၏ အဓိကကာကွယ်မှုအောက်တွင် တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အရေးပါသော ဘေးမဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာကြောင်း Pei က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Rare animals spotted in NW China’s nature reserve
LANZHOU, Oct. 27 (Xinhua) — Snow leopards and jackals were spotted at Anxi National Nature Reserve in northwest China’s Gansu Province, said staff fromalocal nature reserve.
The reserve’s administrative staff said that at least three snow leopards and eight jackals were spotted. Footage showed they were climbing over snowy mountains in pairs searching for food.
“This is the largest population of the two species ever spotted in the reserve,” said Pei Pengzu,aresearcher in the reserve.
Anxi National Nature Reserve is the only nature reserve in China focused on protecting ecosystems and biodiversity of extremely arid deserts, according to Pei.
There are 210 terrestrial vertebrate species in the reserve, among which eight, including snow leopards and jackals, are first-class protected wild animals in China.
Pei said more rare animals have been spotted in recent years, and the reserve has become an important habitat for wild animals under national key protection. Enditem